China TUNLAND ifektri abakhiqizi | Izithombe
I-workhorse eqinile nakho konke ukuhamba komhlaba
Injini ICummins F2.8-120 / 130KW
Amandla 85-96-120-130 / 3600kw
I-Torque 360/1800 ~ 3600-365 / 1600 ~ 3200NM
Izinhlobo Zokushayela 4 * 4/4 * 2
Ubukhulu Sekukonke 5310 * 1880 * 1860
Ibhokisi legiya 5MT / 6AT
I-grille emise iphiko enokhanyiso lwe-crystal diamond, konke okuzokunikeza umuzwa ohlukile, futhi ohehayo wokubuka.
Uhlelo olushukumisayo oluhlome kahle lwe-TUNLAND lunamandla futhi lunokwethenjelwa, hhayi kuphela ukonga uphethiloli nokunciphisa ukungcola, kepha futhi nokuqinisekisa ukuzinza, okukuvumela ukuthi uluthokozele ngokugcwele uthando futhi kukuthathe ungaphezu kwemingcele.
I-ZF 6AT gearbox
I-Mechatronic (ukulawulwa kokudlulisa okuhlanganisiwe)
I-ASIS - isu lokushintsha eliguqukayo
Isilinganiso samandla esisindo esiphakeme (ngokususelwa kuzici ze-Lepelletier gear set)
Ukonga uphethiloli nokuthembeka okuhle kakhulu, kufaka phakathi ukwakheka okungasindi, okuhlanganisiwe nokwenziwe Modular
Umqondo wokuthuthuka womlilo osebenza kahle nge-VVT ephindwe kabili nama-valve amane;
Ukusetshenziswa kobuchwepheshe bokulawula obuthuthukisiwe;
Ukuqhutshwa kweketanga elingena sondlo nokudlula kokuhlolwa kokukhuthazela kuzwelonke okungamahora angama-10,000.
Isakhiwo somzimba esinamandla amakhulu sihlangabezana namazinga wokushayisana kwe-C-NCAP 4-Star
Isakhiwo sefreyimu engqubuzanayo yokulwa nokushayisana, ikholomu yokuqondisa egoqekayo, abagibeli ohlangothini ama-airbags amabili aqinisa amabhande okuphepha
Uhlelo lwe-Bosch oluneziteshi ezine ze-ABS + EBD. Ukhiye wokwehlukanisa ongasheleli we-axle engemuva.
Idizayini Yomhlaba Wonke Yokushayisana Okujwayelekile
UTakumi othatha isinyathelo sokuvikela ukuphepha kwenhloso yesisekelo ukudala ukusebenza okuphezulu kwezokuphepha, ukusetshenziswa kokuqina komzimba komzimba ukufuna ukuvikela ukuphepha okuphezulu
Ikhono le-all-terrain Chassis. Amandla weBanga eliphakeme ngama-60%. I-Sideslip angle 40 degree.
Ukuzinza Yonke imoto idlulisa isivivinyo esinokwethenjelwa sezimo ezihlasimulisayo zamakhilomitha ayizigidi eziyi-1.6, kufaka phakathi izinga lokushisa okuphezulu, ukubanda okuphezulu, kanye namathafa asezintabeni kanye nokuhlolwa kokukhuthazeka kokukhishwa kukazwelonke kwamakhilomitha ayi-160,000.
Ikhono lomsebenzi omuhle kakhulu Isivinini esiphezulu se-160 km / h Amandla weTower Maximum 2500 Kg Ubuningi bokulayisha i-1500 Kg